10 aty aorian’ny fanonganam-panjakana Niha nahantra ny Malagasy
17 martsa 2009 - martsa 2019 . Folo taona katroka omaly ny fivoriana teny amin’ny Episcopat Antanimena, nahitana ny FFKM, sehatra iraisam-pirenena sy ireo mpanao politika, iny ilay fanonganam-panjakana nahafahan’i Andry Rajoelina niakatra teo amin’ny fitondrana,
tamin’izany fotoana; fanadrombahana fahefana satria tsy nisy fifidianana.Teny mahery, narahana fihetsika mamoafady sy fandrangarangana basy no natao ny Raiamandreny am-panahy filohan’ny FJKM ny mpitandrina Lala Haja Rasendrahasina. Voatrerona ihany koa ireo manamboninahitra jeneraly, nahazo ny anjarany torak’izany ny masoivohon’I Etazonia Niels Marquardt,... Ireo miaramila mpiara-dia tamin’I Andry Rajoelina tamin’izany fotoana no nahavita nanao izany rehetra izany nahitanan-dry kolonely isany Charles Andianasoavina sy Noel Rakotonandrasana, izay efa lasan-korazana moa ity farany. Samy nahatsapa tato aoriana kely, nandritra ny fitondrana tetezamita ihany izy mirahalahy ireo fa nentina tany amin’ny lalan-diso ny firenena, ary tsy araka ny niheverana azy hoe hitondra fiovana, ka nanohana an’i Marc Ravalomanana tamin’ny fifidianana filoha farany teo. Fisamborana sy fanenjehana ireo tsy mitovy hevitra amin’ny tena, trafika isan-karazany (hazo sarobidy, omby, volamena…) no nanamarika ny tetezamita. Tapaka tamin’ny ampahany betsaka ny famatsiam-bola, sempotra ireo mpandraharaha Malagasy, ankoatra ny olom-bitsy ( Karana, Sinoa, Malagasy) akaikin’ny fitondrana tetezmita ka niha nitombo harena haingana dia haingana ary nanomboka nanao ampihimamba ny fandraharahana rehetra teto. Nandova io fery navelan’ny tetezamita io ny fitondrana HVM, niezaka ihany saingy tsy nahovoka firy, izay nibaribary rahateo fa zaza navelan’ny HAT, ka maro ny zavatra nitoviana. Tsy mbola nahazo ny fitokisan’ny mpamatsy vola fa na dia natao litania sy resabe isan-kerinandro aza ny hoe tafaverina eo amin’ny toerany eo anivon’ny sehatra iraisam-pirenena I Madagasikara. Tsy hita popoka hatreto ilay hoe 10,6 miliara dolara natao sonia tany Paris ny fiandohan’ny volana desambra 2016. Tsy nifankahitana ny sangodim-panina politika, tsy nisy fampihavanam-pirenena nandeha tamin’izay laoniny fa karazana haingon-trano ny CFM, endrikendrika fizarana seza no tsapa fa nisy tao. Fehiny, efa nahatratra 7,2% ny fitomboan’ny harinkarena tamin’ny fitondrana Ravalomanana, lasaka aty amin’ny 5,1% izany 10 taona aty aoriana…na dia efa nanana ny tetikasa goavana MAP aza I Madagasikara dia tsy nahatratra ny tanjon’ny taona arivo fahatelo (OMD) satria tsy vita hatramin’ny farany io. Nanodidina ny 67% ny tahan’ny fahantrana nandritra ny fitondrana Ravalomanana, lasa 77,60 % izany amin’izao fotoana, raha raaisina amin’ilay hoe olona miaina latsaky 1,90 dolara isan’andro araka ny fenitra iraisam-pirenena. Mbola mariky ny fitomboan’ny fahantrana ny firongatry ny tsy fandriamahalemana, sy ny firoborobon’ny mpivarotra amoron-dalana… Indrisy fa lasa entam-barotra hatramin’ny zanaka menaky ny aina ankehitriny; noho ilay fahantrana. Matoa nanongam-panjakana, dia tokony hahavita tsara kokoa noho ilay naongana kinanjo fahapotehana tsy roa aman-tany no nisy. Nitombo ny fahasahiranan’ny Malagasy tato anatin’ny 10 taona , ary tsy ny fampanantenana hanangana Building no vahaolana amin’io !